'ओमान नेपालको वैदेशिक रोजगार र पर्यटनको लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक बन्न सक्छ ' :राजदूत पराजुली – newslinesnepal
‘ओमान नेपालको वैदेशिक रोजगार र पर्यटनको लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक बन्न सक्छ ‘ :राजदूत पराजुली
प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७५, मंगलवार ०८:५७
ओमानका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा शर्मिला पराजुलीले विगत करिब डेढ वर्ष यता मस्कटमा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् । ओमानका लागि नेपालको पहिलो राजदूत महामहिम शर्मिला पराजुली ढकालले मिति २०७४ जेठ १० गते ओमानको राजधानी मस्कट आएर पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् र उनले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्रको दुई प्रति ओमानका परराष्ट्र मन्त्री महामहिम युसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्लाहलाई मिति २०७४ जेठ २१ गते पेस गरेकी थिइन् । खाडी क्षेत्रमै रहेर अध्ययन गरेकी पराजुली खाडी राष्ट्रमा नेपालीका समस्या बुझ्ने राजदूतका रूपमा पनि चिनिन्छिन् । ओमानका लागि राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै दुई देशबिचको सम्बन्धलाई उच्च तहमा बिस्तार गर्न सफल भएकी पराजुली ओमान नेपाली कामदारका लागि पहिलो गन्तव्य राष्ट्र बन्न सक्ने बताउँछिन् । पराजुली राजदूत भएर ओमान आएपछि नेपालमा पर्यटकको रूपमा जानेको संख्या उल्लेख्य (१५० प्रतिशत) ले वृद्धि भएको भने ओमानमा रहेका धेरै नेपाली कामदारका समस्या समाधान भएका छन् । राजदूत पराजुलीले ओमानमा कार्यभार सम्हालेसँगै ओमानमा रहेका नेपाली कामदारका समस्या समाधानसँगै दुई देशबिचका सम्बन्ध बिस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छन् । राजदूत पराजुली नेपाल–ओमान बिचको सम्बन्ध आगामी दिनहरूमा थप उचाइमा पुर्याउने र ओमानले विश्व राजनीतिमा आप्mनो छुट्टै पहिचान स्थापना गरेको हुनाले नेपालले ओमानसँग विविध विषयहरूमा सहकार्य गर्न सकेमा नेपाललाई धेरै लाभ पुग्ने बताउँछिन् । छिट्टै नै नेपाल र ओमानबिच कूटनीतिक राहदानी वाहकहरूलाई प्रवेशाज्ञा उन्मुक्तिका सम्बन्धी तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि पर्यटनको महत्त्व बमोजिम पर्यटन सम्झौता गर्न लागेको बताउँदै पराजुली नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहयोगको लागि विशेष आभार प्रकट गर्छिन । आफ्नो कार्यकालमा नेपाल–ओमानको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने युवा राजदूतका रूपमा परिचय बनाएकी पराजुलीले नेपालीहरूका लागि ओमानमा अवसरहरूको खोजीमा लागिपरेको बताउँछिन । नेपाल र ओमानको सम्बन्ध बिस्तार र विकासमा दत्तचित्त भएर सक्रिय पराजुलीसँग मस्कट स्थित नेपाली दूतावासमा पुगेर जनसवाल दैनिकका लागि रामजी बगालेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
ओमान र नेपालको सबन्ध कस्तो छ ?
ओमान र नेपालको सबन्ध एकदमै राम्रो छ । ओमानले पहिलादेखि नै नेपाललाई राम्रो दृृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ र नेपालसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न सधैँ नै तयार रहेको छ । ओमान एकदमै औद्योगिक विकास भएको शान्त मुलुक हो । यो देशसँग नेपालको दुई पक्षीय सम्बन्ध दीर्घकाल सम्म जानेछ । त्यस्तै, ओमानका नागरिक नेपालमा पर्यटकको रूपमा जानेको सङ्ख्यामा म राजदूत भएर आएपछि उल्लेख्य (१५० प्रतिशत) ले वृद्धि भएको छ ।
यस्तै, २०७४ असोज ०९–१२ गतेसम्म ओमानमा पहिलो पटक नेपालका तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण टोलीमा तत्कालीन माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महरा, माननीय श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्ला मन्सुर, माननीय महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री आशा कोइराला तथा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो । उक्त भ्रमणका क्रममा उच्च स्तरीय भेटघाटहरू भई दुई देशबिचको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा र्पुयाउने सम्बन्धमा विभिन्न वार्ताहरू समेत भएका थिए । सो भेटघाटका क्रममा नेपाल–ओमानबिचको श्रम सम्झौता सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल भएको थियो र सो प्रक्रिया हाल धेरै अगाडी बढिसकेको छ र छिट्टै नै नेपाल र ओमानबिचको श्रम सम्झौता हुँदैछ ।
त्यति बेला म प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा नेपाली राजदूतावास, मस्कटको सहयोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडीस्थित नेपाली राजदूतावासहरू तथा कन्सुलेटका महामहिम राजदूत एवं नियोग प्रमुखज्यूहरूको एक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनमा नेपाली दूतावासहरूका कार्य विवरणहरू, विद्यमान समस्याहरू तथा समाधानका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नियोगका आगामी कार्यदिशाका लागि मार्ग निर्देशन दिएका थिए । सोही साँझ राजदूत निवासमा ओमानमा रहेका नेपालीहरू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा प्रतिनिधिमण्डलज्यूहरूबिच एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो । सोही भ्रमणका अवसरमा २०७४ असोज ११ गते नेपाल र ओमानबिच द्विपक्षिय परामर्श संयन्त्र (बाइल्याटरल कल्सन्टेसन मेकानिजम) सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपाली राजदूतावास ओमानले के के कार्यक्रम गर्दै आएको छ ?
नेपाली राजदूतावास, मस्कटले ओमानमा कार्यरत नेपाली महिलाहरूको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने गरेको छ । सो शिविरमा ओमान क्यान्सर एसोसिएसन र बरखत अल नुर क्लिनिकले दूतावाससँग सहकार्यमा गरेको थियो । महिलाहरूमा हुने क्यान्सर (अर्बूद) रोग मध्ये स्तन क्यान्सरबाट बच्न २० देखि ४० वर्षका महिलाहरूले स्तनको स्वयं परीक्षण गर्नका साथै प्रत्येक २–३ वर्षमा विशेषज्ञ चिकित्सकबाट स्क्रिनिङ र म्यामोग्रामका साथ विशेषज्ञ चिकित्सकसँगको परामर्श अपरिहार्य भएकोले नेपाली महिलाहरूलाई ‘स्वस्थ्यशक्ति’ को रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास स्वरूप नेपाली राजदूतावास, मस्कटले ओमानमा रहेका नेपाली महिलाहरूका लागि सो शिविर आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा करिब ७५ जना जति नेपाली महिलाहरूले निःशुल्क स्क्रिनिङ तथा ४० पुरुषहरूले निःशुल्क ब्लड सुगर परिक्षण र बीएमआई परीक्षण गरिएको थियो । यस्तै, नेपाली राजदूतावास, मस्कटले ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालय र जनशक्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा मस्कटस्थित ‘कोलम्बो प्रोसेस’ तथा ‘आवुधाबी डाइलग’ राष्ट्रका नियोग प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा एक बैठक आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा ओमानले महिला बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि गरेको प्रयास ‘ऐहसान क्याम्पेन’ का बारेमा ओमानका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए ।
ओमानका परराष्ट्र मन्त्रालय र जनशक्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू तथा उपस्थित अन्य देशका नियोग प्रमुखहरूले नेपाली दूतावासको यस कार्यक्रमको प्रशंसा गरेका थिए । नेपाली राजदूतावास, मस्कटले ओमानस्थित नेपाली संघसंस्थाहरु तथा नेपालीहरूको सहयोगमा नेपालको संस्कृति, हस्तकला तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य अनुरूप मस्कट नगरपालिकाले आयोजना गरेको मस्कट फेस्टिबलमा नेपाली स्टल राखी सहभागिता जनाउँदै आएको छ । यस्तै, नेपाली राजदूतावास मस्कटको आफ्नै जमिन तथा भवन निर्माण सम्बन्धमा पनि पहल गरिरहेको छ ।
नेपालको आर्थिक विकास गर्न राजदूतावासले कस्तो भूमिका खेल्दै आएको छ ?
म राजदूत भएर आएपछि ओमानका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने कार्यमा सधैँ पहल गर्दै आएको छु । यस्तै गरी, नेपालको वाणिज्य व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्नका लागि ओमानका इन्धन मन्त्री मोहमद बीन हमाद अल रुमहिती र ओमानका उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अबेद हसन अल धेसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी नेपालमा इन्धन आपूर्ति तथा देशबिच व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन का विषयमा छलफल गरेको छु । यसै गरी नेपाली दूतावासले ओमान च्याम्बर एण्ड कर्मशसँग बी टु बीको लागि लागि छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस्तै, मैले ओमान एअर तथा ओमानको बजेट एअरलाईनसलाम एअरका कार्यकारी प्रमुखहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी दुई देशबिच हवाई सेवा सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेको छु । यो सँगै सलाम एयर नेपालमा उठडान पर्ने निश्चित भइसकेको छ । यो सँगै नेपाली संघसंस्थाले आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउँदै आएको छु ।
प्रशासनिक सुधारकलागि दूतावासमा कर्मचारी अभावको समस्या समाधानकालगि केही थप कर्मचारीहरू नियुक्ति गरिएको छ । दूतावासले नयाँ हटलाइन र नयाँ वेभ साइट सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल पहुँच पुग्ने छिटो माध्यम भएकाले दूतावासमा केही समस्या भए ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप मार्फत पनि दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
तपाईँ ओमानमा राजदूत भएर आईसकेपछि तपाईँले गरेका मुख्य कामहरू के–के हुन् ?
सर्वप्रथम त नेपाल र ओमानको बिचमा सम्बन्ध विस्तार नै हो । त्यस्तै, यहाँका नेपाली कामदारको हक, हित, सुरक्षाको काम गर्नु नै हो । यहाँ नेपाली महिला घरेलु कामदारको अलिक समस्या देखिएको छ । त्यसको पनि बिस्तारै समाधान भएर जाँदै छ । त्यस्तै, मानव बेचबिखनका नियन्त्रको विषयमा पनि दुई देशको भूमिकामा सेतुको भूमिका निर्वाह काम भएको छ ।
घरेलु महिला कामदारको समस्या समाधान कसरी गर्नु पर्छ ?
यसको समाधानको लागि सर्वप्रथम त नेपाल नै एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्छ । आप्रवासी कामदार ओमानमा मात्रै होइन, यो सबैतिर रहेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर रोक्न सकिन्न । त्यस्तै, यहाँ आउने कामदार धेरै जसो ठगिएर आएको बताउँछन् । उनीहरू ओमान नभई दुबई आएको बताउँछन् । तर, पनि एजेण्टको कारण यहाँसम्म आएको बताउँछन् । यसै गरी, कति कामदार अन्य देशमा जस्तै, इजरायल, दुबई, कुवेतमा यति वर्ष काम गरेरे आएको बताउने गरेका छन् । त्यस्तै, जबसम्म नेपाली कामदार अवैधानिक तवरले आउने कुरा नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुन्न । त्यस्तै, यहाँ समस्या लिएर आएकाको हामी कूटनीतिक तवरले समाधान गर्ने गरेका छौँ । त्यस्तै, कतिपय केसमा हामी रेस्क्यु गरेर सुरक्षित तवरले घर फर्काउने गरेका छौँ । त्यस्तै, कानुनी सहायता आवश्यक परेको बेला दूतावासले वकिल राखेर पनि सेवा दिँदै आएको छ ।
ओमानसँग नेपालको सम्भावना र चुनौती के के छन् ?
ओमान नेपालको वैदेशिक रोजगारको लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक बन्न सक्छ । यहाँ होटेल व्यवसाय फ्रस्टाएको कारण नेपाली कामदारको लागि अवसर निर्माण हुन सक्छ । यस्तै दुवै देशको विदेशी नीति उस्तै भएको कारण हामीले यसलाई फाइदा लिन सक्छौ । यसको लागि गर्भमेन्ट टु गर्भमेन्ट काम गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारको लागि पनि जीटुजी बेसमा काम गर्दा नेपाललाई फाइदा नै हुने देखिन्छ । यसको लागि नेपालले ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अन्तमाः ओमान आउने नेपाली कामदारलाई सबै कुरा बुझेर जानेर आउन आग्रह गर्दछु । कसैको लहलहैमा नलागी कानुनी तवरले आउँदा कामदारको हक हित सुरक्षा हुने हुँदा नेपाली कामदारलाई ओमान आउँदा राम्ररी बुझेर मात्र आउन आग्रह गर्दछु । त्यस्तै, कुनै पनि समस्या परेका ओमान स्थित नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क राख्न म अनुरोध गर्दछु ।